Bheka Mina Ngedwa Muthi Usebenza: Korobela & Idliso | eSouth Africa
YONKE IMISEBENZI YAMI:
UKUVIKELWA KWEMILIKI EMNYAMA:
Lesi siphonso sokuvikelwa sizokugcina uvikelekile ezitheni naseziqalekisweni phonsa kuwe. I-Black Magic namandla amabi asakazeka emhlabeni futhi abantu abaningi bayayithola. Ngokungivumela ngikuphonselele lesi sipelingi, uzozizwa uvikelekile, ukhululekile ngokwengeziwe futhi uzokujabulela kakhulu ukuphila njengoba ungadingi ukuhamba ucabanga ngokuthi uma othile efuna ukukulimaza ngokomoya ngomlingo omnyama nangeziphonso ezingezinhle zokukudalela izingozi. noma ukhulula okungokwakho.
Izindandatho zemilingo nama-WALLETS:
Thola izindandatho zami zemilingo ezinamandla nezikhwama, amasongo, amabhande, isikhwama futhi ubone ukuthi usuku lwakho ukuze izinguquko usuku ukuphila zezimali kanye ukwakheka abantu bazibuze ukuthi lucky futhi kuphumelele wena are.do udinga imali, ikhasimende Luhambo, uthando elahlekile, umshado Trouble, lucky indandatho / isikhwama charm, Business andisa, Witch izikebhe , amashwa , Amaphupho amabi , ubumpofu, Umona.Amacala ezinkantolo, Izikweletu ezimbi, Iziphonso zempumelelo. Ngabe ubulokhu uzama ukufuna usizo enkingeni eyodwa noma ngaphezulu ake ngibe yithemba lakho lokugcina zonke izinkinga zixazululiwe, Ucebe kunanini ngaphambili.
Abantu abaningi beze kimi ukukhulisa inhlanhla yabo ikakhulukazi labo abagembulayo, ababhejayo noma abenza noma yini ehlobene nalokhu. Abaningi banqobile futhi babuyele njalo kimi nezipho zokubonga futhi baphila impilo enenjabulo. Ukuwina kungahle kungafiki njalo uyagembula, kepha ngiyazi ukuthi isikhathi sakho sokuwina nini futhi yiso kanye lapho ngiku-oda ukuthi ugembule futhi uzuze lokho okukufanele. Abaningi basebenzisa izindandatho zami zomlingo nazo zonke ezinye izinhlobo zemithi ukukhulisa inhlanhla yabo yokuwina. UWhatsapp +27639471873
IMIPHUMELA YOMSHADO :
Ngabe ubudlelwano bakho noma umshado wakho uyachitheka? Ngabe abantu obathandayo bahlala bekushiya noma bakulahle ngaphandle kwesizathu noma nencazelo yokuthi bakushiye ngani? Ngabe ukuphola kukhona umuntu okukhohlisayo futhi ufuna ukukuyeka lokho? Ingabe ningabangani nje kodwa ninemizwa enamandla ngalowo muntu futhi nibona sengathi kufanele nibe ngabathandi futhi nakhe impilo ndawonye eholela emshadweni? Ngabe abasekhweni lakho bakunikeza izinkinga, zihlala entanyeni yakho futhi abakwazi ukukuvumela wena nomlingani wakho niphile impilo ejabulisayo? Ngibuze ngeKorobela Noma Love Potions
Iziphonso zemali ziphonswa ngenhloso eyinhloko yokushintsha isimo sezezimali esisodwa esivame ukusuka kokubi kuye kokungcono. Ngabe uyasebenza kepha awukwazi ukonga ngokwanele , ingabe uthola inkokhelo ephansi, ingabe udinga ukwenyuselwa amaholo, noma ufuna nje ukuthola imali yokhokho ngokwenza amasiko nemihlatshelo ezoshintsha impilo yakho unomphela kungakapheli usuku noma ezimbili zokuthakatha.
ICHAZA UKUSIZA IZINGANE
Kade uzama ukuthola izingane isikhathi eside kodwa wehluleka? Ingabe inkinga ikuwe, umlingani wakho, noma awazi? Woza kimi uzofuna usizo futhi uzoba nezingane ngokushesha lapho ufisa. Kwezinye izikhathi owesifazane noma indoda idinga nje ukuhlanza amashubhu ukuze ithuthukise ukufa futhi unike amandla umbhangqwana ukuba ube nezingane futhi yingakho udinga usizo lwami. ungakhetha futhi ukuba nengane yomfana noma yentombazane. Ngizokusiza ube nezingane, ngaphandle kokuthi kukhishwe i-ovary yowesifazane. Am the Best Traditional Healer, Sangoma / Inyanga Psychic Spells Caster obukade umfuna .
BHEKA ISITHA ESIBHONENI
Kulo mhlaba cishe wonke umuntu uma kungeyena sonke kunezitha nabantu abangafisi ukusibona siphumelela kukho konke esikwenzayo. Abanye balapho abantu baze baqhubeke basebenzise imilingo kuwe ukuvimba inhlanhla yakho ukuze ungaphumeleli kunoma yini oyenzayo . Woza kimi namuhla futhi ngizokusiza ubone izitha zakho, labo obaziyo nalabo okungenzeka ubungakaze wazi ngabo kodwa bakufisela inhlanhla. Ngiphinde ngikunikeze isivikelo ngemuva kokuvezwa kwezitha zakho.
Ngabe uhlukanisile nesithandwa sakho noma uzizwa sengathi ubudlelwane buzophela? Uyasibona isidingo sokuhlangana kabusha nesithandwa sakho osilahlile kodwa ube unemizwa enamandla ngaso? Ngabe uyathola isehlukaniso kepha usafisa ukulungisa izinto futhi umise isehlukaniso futhi uvuselele uthando phakathi kwakho njengoba lwalunjalo ngaphambili? Uma ucabanga noma uzizwa ukuthi konke kuhamba kabi empilweni yakho yothando, ukuthi umuntu omthandayo uyakhohlisa, ukuthi uhlushwa ngamashwa empilweni yakho yothando, ukuthi kukhona okuvimba impumelelo noma ukuchuma ebudlelwaneni bakho noma emshadweni wakho mhlawumbe wena ngidinga ukwenza manje!
IZIMPENDULO ZOTHANDO LWENGQONDO:
Iziphonso zothando zenzelwe ukwenza omunye umuntu ashintshe indlela azizwa ngayo ngawe, akhulume nawe, aphendule kuwe, futhi aphile nawe. Intelezi yothando inamandla anele ukulawula indlela umuntu azizwa ngayo ngawe, futhi izokwenza umuntu akuthande inqobo nje uma ufuna lowo muntu akuthande futhi akuhloniphe. Uthando iziphonso zibandakanya Bring Back Lost Lover , Umuthi Wokukhipa Idliso , Bheka Mina Ngedwa , Izithandani Nezithandani Zobungqingili , umshado, ukukhanga, ukuheha, ukwehlukana , isehlukaniso nokunye okuningi.
UKUSUSWA KWENHLANHLA OKUBI:
Amasu wokuhlanza ngokomoya okususa amashwa asetshenzisiwe ngaphezu kwezinkulungwane zeminyaka futhi kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo. Ungazihlanza kepha ezimweni ezinzima ungathintana nomelaphi woMoya , noma okomoya. Wonke umuntu uhlangabezana nokunganaki empilweni, kufaka phakathi inhlebo, isiphithiphithi emsebenzini, ukuhlukana nokunye ukulahleka. Bangakwazi ukuvimba iNhlanhla yakho uma ubavumela ukuba bakhe futhi baqoqe amandla. Ukuhlanza kungenziwa lapho usebenza khona, ekhaya, emotweni yakho noma kwenye indawo ukukhipha inhlanhla futhi ube nempilo engcono.
WINA COURT CASE:
Iziphonso zami ezinamandla zenkantolo zingakusiza ukuthi unqobe noma yiluphi udaba lwezomthetho wesimo sakho owonile noma okonile. Iziphonso zami zamacala asenkantolo zihlanganisa zonke izindaba zomthetho ezivela emacaleni obugebengu nakwezomphakathi. Uma ulahlekelwe ukukholwa ngoba icala lakho alisuki enkantolo noma ejele lakho ngecala ongalenzanga, ngizosebenzisa iziphonso zami zePowerful ukwenza isiqiniseko sokuthi uthola ubulungiswa obudingayo.
Thola ijaji nejaji ngokukuvuna futhi uqinise inhlanhla ngeziphonso zami zasenkantolo ezisebenzayo
IZINDAWO ZOKUTHUTHA IZIDAKAMIZWA
Uma ngabe ubukade ulwa nezidakamizwa notshwala okuvame ukubangelwa ingcindezi yontanga, izinkinga zobudlelwano, izingxabano zomndeni, ukukhulula umuntu omthandayo, Ubuthakathi nokuningi, futhi usuyibonile le nkinga, usuvele ubonile udokotela osezingeni eliphezulu ngayo kepha wehluleka thola imiphumela, nakanjani lena indawo efanele yokuthola usizo ngoba i- Astrology yaziwa kakhulu ngokusiza ngezinkinga zezidakamizwa nezinkinga zomlutha ngomlando wethu wesintu. Nginolwazi kulokhu futhi ngisize abantu abaningi ukuthi beze.